I-Agate yokulwa iPylos itshintsha imbali yobugcisa baseNtshona | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Yonke into iyatshintsha kwaye yonke into esinokuyiqonda ukuba ilungisiwe, njengokuvela komntu ngokwakhe njengendlela eyenziwayo ukuza kuthi ga kulo mhla kubugcisa, inokujikwa ijonge ezantsi ukuze soyika ke ngekwenziwe amawaka eminyaka eyadlulayo.
Un ukufumanisa okutsha ngabaphandi kwiYunivesithi yaseCincinnati Imalunga nokutshabalalisa iziseko zophuhliso lwempucuko yaseNtshona. Ngaphezulu konyaka emva kokufumanisa ingcwaba elineminyaka engama-3.500 XNUMX ubudala yomkhosi wobudala beBronze eGrisi, ilitye lakudala eliqingqiweyo linokubhala kwakhona imbali yobugcisa.
Eyaziwa ngokuba yiTomb yeQhawe uGriffin, urhulumente wase-Greek uzibizile iindaba njengokufumana okubaluleke kakhulu kwiminyaka engama-65. Eli ngcwaba lisePylos, Greece, kwaye lide lafika malunga ne-1.500 BC.
Ingcwaba laligcwele zonke iintlobo zobutyebi, kodwa elona xabiso libalulekileyo kuya kufuneka lifunyanwe kamva. I-Combate Agate yasePylos lilitye elincinci eliqingqiweyo ngesandla esisezantsi esinika iinkcukacha zobuchule obukhulu. Kuthathe ngaphezulu konyaka ukuba abo babephethe ulondolozo lwayo bayicoca kwilinestone ukuze babone umfanekiso wegorha emfazweni.
Into emangalisayo ngomfanekiso wegorha emfazweni yileya ibonisa ukumelwa komzimba womntu kwinqanaba leenkcukacha kunye nakwimisipha engafumanekanga ilingana kude kube lixesha lobugcisa bamaGrike kwiminyaka eli-1.000 XNUMX kamva. Kukufunyanwa nje okumangalisayo kuyo yonke into eyiyo.
Isizathu sokubaluleka kwayo kungenxa yokuba bekucingelwa ukuba impucuko yase-Mycenaean yayinokwabela imifanekiso yenkcubeko yaseMinoan, inkcubeko yesibini yaseYurophu yeCopper kunye neBronze Age, eyayiza kuvela kwisiqithi saseKrete phakathi kwe-2700 ne-1450 I-BC Kodwa yiAgate yokulwa iPylos, edityaniswe nezinye izinto ezifumaneka engcwabeni, ezo zikhomba kutshintshiselwano olukhulu lwenkcubeko kunokuba bekholelwa ngaphambili.
Kwaye ngenxa yezo iinkcukacha ezichanekileyo ze-anatomy yomntu kunye nokuchaneka kokukrola, esenza ukuba ababhali-mbali bezobugcisa baphinde bavavanye ixesha elifanelekileyo lokuba ubugcisa baseNtshona baphuhliswa njani. Ke impucuko yaseMycenaean yayivelisa uhlobo lobugcisa olungazange lucingelwe ukuza kuthi ga kulo mhla, ngakumbi i-anatomy yomntu kunye nentshukumo. Ngokungaqhelekanga.
Unolwazi oluthe kratya kwiwebhu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Ukukrolwa kwelitye elineminyaka engama-3.500 XNUMX ubudala kungayitshintsha imbali yobugcisa njengoko siyazi